John Obi Mikel oo si cad uga hadlay mustaqbalkiisa Chelsea – Gool FM
John Obi Mikel oo si cad uga hadlay mustaqbalkiisa Chelsea
(London) 02 Agoosto 2016. Laacibka reer Nigeria John Obi Mikel ayaa si cad uga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea wuxuuna carabka ku dhuftay inuu kooxda la sii joogi doono xilli ciyaareedkan.
29-jirka ayaa lagu wadaa inuu galo xilli ciyaareedkiisii 11-aad ee Stamford Bridge laakiin waxaa lagu qasbay inuu aqbalo door la dhimay sanadihii dambe.
Waxaa jiray qiyaas fikradeed laga qabay mustaqbalkiisa waxayna warinayeen wararka ka imaanaya Talyaaniga bishii la soo dhaafay in Chelsea ay u bandhigtay laacibkeeda qadka dhexe kooxda Inter Milan.
Laakiin Obi Mikel ayaa iminka yiri: “Shaki la’aan waxaan joogayaa Chelsea waxaana isku dayi doonaa inaan teeda ugu fiican siiyo kooxda sida aan had iyo jeer sameyn jiray.
“Waxaan doonayaa inaan kooxda ka caawiyo inay wax kasta ku dagaalanto, guul kasta aana ku guuleysano koobab, waxaan kaloo doonayaa inaan ka caawiyo inay u soo baxaan Champions League markale sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu macquulsan.
“10-sanadood waxaan soo aadayay isla hal xero tababar, isla hal qol dherbadelasho, waa koox cajiib ah, oo uu leeyahay milkiile cajiib ah. Sida qoys oo kale ayay ii yihiin aniga. Waa meel noqotay qeyb iga mid ah aniga.”.
Wiilka reer Nigeria ayaa galay sanadkiisii ugu dambeeyay ee qandaraaska uu kula joogo Blues wuxuuna doonayaa inuu ku guuleysto heshiis cusub kaddib markii uu wacdaro tuso tababaraha cusub ee Antonio Conte.
DHEGEYSO: Waraysi ku saabsan Ciyaaraha SEUKI 2016 oo Stockholm lagusoo afjaray
SAWIRRO: Liverpool oo dib ugu soo laabatay Ingiriiska kaddib...